Amaro laga soo saaray Amniga degmada Guriceel | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Amaro laga soo saaray Amniga degmada Guriceel
Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay dhanka amniga, kaas oo uu guddoomiyay Guddoomiyaha Degmada Guriceel faarax Cabdi Macalin, iyada oo laga soo saaray ammaro la xiriira dhanka Amniga.
Shirka ayaa waxaa ka qeyb galay, taliska Booliska degmada Guriceel, Nabadsugidda, Saraakiisha ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad, Ciidamada Qeybta 21,aad Guutada 15,aad, taliska Gorgor iyo kuwa Daraawishta Galmudug.
Taliyaha Booliska degmada Guriceel Cismaan Cali Hudeey oo Ammarada Warbaahinta la wadaagay ayaa sheegay in mamnuuc ka tahay degmada Guriceel in qof Shacab ah uu hub ku dhex qaato, sidoo kalena Ciidamada ka aqbaleyn rasaasta ay mararka qaar iska ridayaan.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in Ciidamada kala duwan ee ku sugan degmada ay diyaar u yihiin sugida amniga degmada Guriceel & degaannada hoostaga, balse Shacabka looga baahan yahay inay Ciidamada kala Shaqeeyaan sugida Amniga.
Tan iyo markii xoogaga Ahlusunna ee degmada Guriceel kula dagaalamay Ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug ay ka baxeen ayaa waxaa siweyn loo adkeeyay amniga, iyada oo dhowr jeer la soo saaray ammaro la xiriira Amniga.
Amaro laga soo saaray Amniga degmada Guriceel was last modified: December 2nd, 2021 by warsan radio
Somaliland oo xukun ku riday Askar kufsii u geystay Gabar 13 jir ah
Dhageyso:-magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan.